Fifidianana fihodinana faharoa : Ravalomanana Marc te-hampiombona mba hampitovy lanja
MH 11:35:00 politique
Nitafatafa tamin'ny mpanao gazety ny kandida Ravalomanana Marc io maraina io ary nilaza fa vonona tanteraka hiatrika ny fihodinana faharoa mba hisehoan’ny safidim-bahoaka marina. Nanamafy fa tsy misy fepetra hapetrako hoan’ireo izay te-hanohana azy :
Miara-miasa amin’ny HVM ve ianao ?
Efa misy ! Ary mandeha « automatique » izany, efa misy ny fiaraha-miasa eo amin’ny ben’ny tanàna HVM satria ny misy ben’ny tanàna HVM sy TIM mifankahita amiko any am-pandehanana any ka izaho tsy mandà ny hiara-miasa amin’ireny.
Voizina hoe manavakavaka foko sy ny eny ambany tanàna ianao, aiza ho aiza ny amin’izay ?
Ahoana no hanavakavahana olona nefa ny asa ataoko dia hoan’ny olona rehetra : manamboatra lalana mankany aminy aho, manome asa, mampianatra ny zanany, tena te hanampy ny olona eny ambany tanàna ny tenako fa tsy marina izany. Olona niara-niasa tamiko milaza fa izy no akaikin’ny olona eny amin’ireny toerana ireny no tsy faly dia manaparitaka izany tsaho izany dia nandaitra, dia mino koa ny avy eny ambany tanàna. Nefa ny ahy dia « actions » no tiako hataoko fa tsy vava fotsiny, tena hanampy aho, tena hamonjy aho ary hampivoatra ny fiainany aho.
Resaka ala tahaka fizaràna kits scolaires, manifesto ?
Samihafa ny kopia sy ny tena « original », ary tena ho samihafa, ny iray nofinofy ary tsy izy no namorona azy. Fa ity manifesto ity niainga tamin’ny fikarohana izay hampandroso an’i Madagasikara, natao teny malagasy izay vao nadika tamin’ny teny vahiny. Ny maika izao dia hatao ny lalana, hananganana orinasa sy toeram-pitsaboana, hampiakarana ny sandam-bola malagasy, hampiharina ny « décentralisation effective » hanome hasina ny fokontany sy ny sefom-pokontany, ao koa ny ben’ny tanàna,… Hampiakarina ny ambompo maha malagasy mba tsy ho « yes man » na «oui m’sier » foana. Hamafisana ny fifandraisana amin’ny any ivelany amin’ny alalan’ny fametrahana ny masoivoho any amin’ireo firenena matanjaka toa an’i Allemagne, France….
Nanakatonana orinasa ianao fony teo amin’ny Fitondràna, mbola hanakatona indray izany ianao rehefa tonga eo amin’ny Fitondràna ?
Raha nisy orinasa nidina tamin’izany dia hosokafana indray izy ireo mba hisian’ny fifaninanana. Raha tiana handroso ny ekonomia eto Madagasikara dia avela hanjaka ny fifaninanana amin’ny lafiny rehetra.
Fanenjehana ireo olona manampy anao ?
Voalohany aloha tena faly aho ary misaotra ireo olona manampy ahy, toy ny antoko HVM ary koa ny mpanolo-tsaina manokan’ny filoha toa an-dry #Mbola tafaray sy ireo ministra miaraka aminy, isaorako ny fisian’ireny olona ireny ka tsy ho malailay fonosana aho, ny hahasoa ny firenena no kendrentsika miaraka izay no mahatonga ilay filamatra vaovao hoe « Hampiombona mba hampitovy lanja » : hampiombona ny mpanao politika maromaro mba hampitovy lanja ny vahoaka malagasy sy hialàna amin’ny fizarazarana hiatrehana ny fihodinana faharoa. Tena misy ny antsojay amin’izao mahazo an’i Mbola rehefa afaka ny IST dia nosavaina ny tranony ary nogiazana ny « coffre » nefa tao angamba ilay vola saika hanampiany ahy. Tena misy ny antsojay amin’izao mahazo an’i Mbola rehefa afaka ny IST dia nosavaina ny tranony ary nogiazana ny « coffre » nefa tao angamba ilay vola saika hanampiany ahy.
Tsy te hiditra amin’ny fihodinana faharoa ny ankabeazan’ny mpanao politika ary mangataka fanafoanana ny fifidianana na miroso amin’ny tetezamita ?
Lazaiko aminareo tsy afaka misahana irery ny fikarakarana ny fifidiananana izany i Madagasikara fa miankina be dia be amin’ny fanampiana avy any ivelany, izay no anton’ny « basket fund ». Raha misy ary ireo mpanao politika nahazo vato mikofokofoka dia tsy afaka mandika ny lalàm-panorenana ny CENI. Fa tsy maintsy mizotra io matoa nandrotsaka vola 1 tapitrisa ny vondrona eoropeana dia eken’ny « observateurs » izay nanara-maso ny fifidianana, tsy afaka miolonolona irery Madagasikara fa tsy maintsy miaraka amin’ny firenen-dehibe ka raha mikononkononana izy ireo na mitady hanakorontana , tany misy fanjakana anie ity e.